दुई-चार चक्की औषधिले निको हुने स्वाइन फ्लुको किन यत्रो आतंक ? | Nepali Movie, New Nepali Song, Nepali Video, Nepali News, Lok Dohori, Nepal Result, Live TV, Live FM
दुई-चार चक्की औषधिले निको हुने स्वाइन फ्लुको किन यत्रो आतंक ?
स्वाइन फ्लु एक प्रकारको स्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग हो । यो नयाँ र चर्चा गरिएजस्तो खतरनाक रोग होइन । इन्फ्लुएन्जा अर्थात एचवन एन वन नामक...
स्वाइन फ्लु एक प्रकारको स्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग हो । यो नयाँ र चर्चा गरिएजस्तो खतरनाक रोग होइन । इन्फ्लुएन्जा अर्थात एचवन एन वन नामक भाइरसका कारण यो रोग लाग्ने गर्छ । यो रोग १९१८ मा अमेरिकामा पहिलोपटक देखिएको हो । सिडिर यापिड भन्ने ठाउँमा आयोजना गरिएको सुंगुर मेलाबाट सो भाइरस संक्रमण भएको हो । सुरुमा सुंगुरहरुमा देखिएको यो संक्रमणबाट मानिसहरु पनि ग्रस्त भए । संसारभर फैलिएयो एनवन एनवन भाइरसका कारण संसारभर लाखौंको ज्यान गयो । रोग फैलिएको एक वर्षपछि एक एक जना पशु चिकित्सकले अनुसन्धानबाट पत्ता लगाए कि त्यो भाइरस एचवन एन वन थियो । त्यही एचवन एन वन नै स्वाइन फ्लु हो । उनले पत्ता लगाएकी स्वाइन फ्लुको मुख्य श्रोत चरा चुरुंगी हुन् । पछि यो सुंगुर हुँदै मानिसमा फैलियो । यो अचम्मको भाइरस हो ।
यस अर्थमा अचम्मको कि यो कहिले चरा, कहिले सुंगुर र कहिले मानिसमा घुमिरहन्छ । यो कहिले आफैं बिलाएर जान्छ । कहिले फेरि महामारीमा रुपमा आउँछ । चाख लाग्दो कुरा के छ भने गत वर्ष देखिएको एच वन एन वनमा पहिलोपटक १९१८ मा देखिएको ८ मध्ये ३ वटा जिन फेला परेको थियो ।
यो संक्रमणले मानिस वा जनावरको स्वास नलीमा संक्रमण गर्छ । स्वाइन फ्लु सजिलै संक्रमण हुनसक्छ । यो हावा, सिंगान वा थुकबाट सर्न सक्छ । यो भाइरसबाट संक्रमित मानिसले खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा एक जनाबाट अर्कोमा सर्ने गर्छ । संक्रमितहरुले प्रयोग गरेको साबुन, टाबेल, धारा, भाँडाकुँडा, ओछ्यान र कपडाबाट यो रोग सर्न सक्छ । यस्तै संक्रमितले छोएको घर, कार्यालय, गाडी वा जहाजको ढोकाबाट पनि यो फैलन सक्छ ।
स्वाइन फ्लु चिसो मौसममा बढी छिटो फैलन्छ । सुरुमा रुघा खोकजस्तै लक्षण यसमा देखिन्छ । त्यसपछि बिस्तारै ज्वरो आउने, घाँटी सुख्खा हुने, शरीर वा टाउको दुख्ने वा झाडापखाला लाग्ने हुन्छ । माथिका अलावा स्वास फेर्न असजिलो हुने, वाकवाकी लाग्ने, रिंगटा लाग्ने वा पेट दुख्ने जस्ता लक्षण एकैसाथ देखिए भने तत्काल अस्पताल जानुपर्छ ।
नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना छ । लाखौंको संख्यामा मानिसहरुको आवतजावत भइहेको हुन्छ । धेरैवटा नाका छन् । सरकारले नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको सुनिन्छ । तर यो तरिका प्रभावकारी हुन सक्दैन । किन भने कुनै निश्चित नाकाबाट मात्र मानिसहरुको आवतजावत हुँदैन । खुला बोर्डर भएको स्थानमा निश्चित ठाउँमा हेल्प डेस्क राखेर केही हुँदैन । यो विमानस्थलमा हेल्प डेक्स राखेर इबोला भाइरस चेक गरेको जस्तो होइन । स्वाइन फ्लु फैलन सक्ने क्षमता भएको रोग हो । त्यसैले सरकारले यसको संक्रमण रोक्न सक्दैन ।
बरु यसो गर्नुपर्छ
सरकारले सहरका सरकारी र निजी अस्पताल, क्लिनिक र रिसर्च सेन्टरका साथै गाउँगाउँमा रहेका स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्यचौकीहरुमा स्वाइन फ्लुको औषधि तयारी हालतमा राख्नु पर्छ । सबै अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थालाई सम्भावित महामारी नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्थानबाट औषधि र उपकरणसहित उपचारका लागि आवश्यक तयारीका लागि निर्देशन दिनुपर्छ । नाकामा चेक गर्ने होइन । यसको औषधि सस्तो र सर्वसुलभ छ । औषधि सबैतिर पठाउन कुनै गाह्रो कुरा छैन । यत्ति कुरा हो कि सरकार त्यसका लागि गम्भीर हुनुपर्छ ।
दिनमा दुई चक्कीका दरले पाँच दिन खाए निको हुने रोगका लागि किन यत्रो हल्ला खल्ला गर्नुपर्छ ? बरु जनतालाई भन्नुपर्छ कि झाडापखाला, रुघा, खोकी लागेको छ भने तत्काल अस्पताल वा चिकित्सकको सम्पर्कमा जाऊ । नाकानाकामा चेक गरेर स्वाइन फ्ले निको पार्ने सपना नदेखे पनि हुन्छ ।
मानिसहरुको बढी जमघट हुने स्थानमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ । बस, प्लेन, स्कुल, क्याम्पस, हाटबजार र बन्द कोठामा हुने कार्यक्रमबाट स्वाइन फ्लु संक्रमण हुन सक्छ । ती स्थानमा आफू पहिल्यै सचेत हुनुपर्छ । जस्तो सामान्य नै भए पनि माक्स लगाउने र हाच्छ्युँ वा खोकी लाग्दा रुमालले मुख छोप्न सकियो भने मात्र पनि स्वाइन फ्लु संक्रमण धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बरु सरकारले सार्वजनिक मिडिया मार्फत वा अरु कुनै माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई केही अपिल गर्नुपर्छ । रोगको प्रकृति, अपनाउनुपर्ने सतकर्ता, रोकथामको उपाया, उपचार आदिबारे भन्नुपर्छ । अरु केही भन्न नसके पनि सरकारले हाच्छ्युँ आउँदा र खोक्दा मुख छोप्नुस् भन्ने हने भने पनि रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी हुन सक्छ ।
अहिले स्वाइन फ्लु आतंक फैलाउने काम भइरहेको छ । मानिस मरेको समाचार सुन्दा सबैलाई डर लाग्नु स्वभाविकै हो । मानिस मरेको हल्ला चलेपछि डर लाग्नु स्वभाविकै हो । तर समयमै रोग पत्ता लगाउन र औषधि सेवन गर्न सकियो भने सजिलै निको हुन्छ । १९१८ मा यो रोग विश्वभर फैलिएको थियो । त्यतिबेला औषधि उपचार थिएन । चिकित्सक थिएन, रोग पत्ता लागेको थिएन । तर आज औषधि छ । सार्कका भिआईपी काठमाण्डु आउँदा औषधि र चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने सरकारले स्वाइन फ्लुको औषधि उपलब्ध गराउन किन सक्दैन ? सर्तकता छाड्नु हँुदैन । आतंक मच्चाउने होइन । स्वाइन फ्लुबारेमा जनतालाई कुरा बुझाउन सरकार, सञ्चार माध्यम, सचेत नागरिक सबै लाग्नुपर्छ ।
Nepali Movie, New Nepali Song, Nepali Video, Nepali News, Lok Dohori, Nepal Result, Live TV, Live FM: दुई-चार चक्की औषधिले निको हुने स्वाइन फ्लुको किन यत्रो आतंक ?